Tọzdee, Disemba 7, 2017 Tọzdee, Disemba 7, 2017 Douglas Karr
Anyị tụlere ọtụtụ uru nke ijikọta nkata ndụ na weebụsaịtị gị na otu pọdkastị ahịa anyị. Jide n'aka na-akụ na! Mkparịta ụka ndụ na-akpali mmasị na ọnụ ọgụgụ na-egosi na ọ nwere ike ọ bụghị naanị inye aka mechie azụmahịa, ọ nwekwara ike melite afọ ojuju ndị ahịa na usoro ahụ. Ndị ahịa chọrọ enyemaka mana, n'uche nke m, ha achọghị ịgwa ndị mmadụ okwu. Callkpọ oku, ịgagharị osisi ekwentị, ichere oge, na ịkọwa